तीज गीतमा आधुनिकता : शैली फेरिएको कि मान्छेको रूचि ? - Entertainment Khabar
प्रकाशित मिति: आइतबार, आषाढ २१, २०७७ समय: १६:५९:२६
‘किन बाबु झोक्रिएको ज्यानलाई सञ्चो छैन र,
तीज आयो दिदी लिन जाने हैन र ?’
दशकअघि तीजमा यस्तो गीत गाइएको थियो। पुरुषोत्तम न्यौपाने, बीमाकुमारी दुरा, मञ्जु गुरुङ र न्यौपानेको स्वर, रमेश बीजीको शब्द तथा गायक पुरुषोत्तमकै लय रहेको थियो यो गीतमा। त्यो बेला विशेषगरी घरमा रहेकी दिदी–बहिनीलाई माइतीबाट लिन जाने कुरा तीज गीतमा बढी लक्षित हुन्थे। माइतीबाट कोसेली बोकेर जाने, दिदी–बहिनीलाई तीजका लागि ल्याउने जस्ता कुराहरूलाई गीतमा देखाइन्थ्यो।
आजकालका तीज गीतमा यस्ता बोल सुन्न पाइन्न। त्यो समयका गायक/गायिकाहरू त अचेल ओझेलमै परिसकेका छन्। अचेल श्रीमान, सासु वा नन्दले दिने पीडा तीजका गीतमा भेटिदैन। समाजका कुरितिहरू माथि गीत बन्न छोडेका छन्। दर, गरगहना तथा अन्य महंगा सामग्री चाहियो भन्ने जस्ता सन्देश बोकेका गीतहरू छ्याप्छ्याप्ती छन्।
अहिले अवस्था फेरिएको छ। जनजीवनमा आएको परिवर्तनसँगै तीज गीत फेरिएका छन्। पहिलेका जस्ता अहिलेका गीत सुरिलो नलाग्न सक्छ। चिच्याए झै–च्याठ्ठीएझै लाग्ने अहिलेका गीत महिलाहरूमाझ लोकप्रिय बन्दैछन्। हो, अहिले तीज गीतको पूरा शैली नै परिवर्तन भएको छ।
‘फरिया लरिलै बरिलै….
फरिया भिजायो मेरो, वर्खे पानीले, ए खर्के पानीले
मनको पहिरो बुझेन लाहूर जानेले,
आगनीको डिल भत्कियो माली गाईको खुरले
तीजका गीत गाउँछु आज आफ्नै सुरले’
२४ जुनमा युट्युबमा अपलोड गरिएको यो गीतमा झण्डै २५०० कमेन्ट आएका छन्। प्रतिक्रियामा गाली र ताली दुवै छन्। धेरैले गीतका शब्दमा कुनै आपत्ति जनाएका छैनन्। उनीहरूको आपत्ति हो त केवल- गायिका तथा भिडिओकी मोडल प्रिती आलेको पहिरनमा। छोटो पहिरनमा देखिएकी प्रितीले तीजलाई पुरै आधुनिकीकरण गरेकी छिन्।
गीतप्रति आपत्ति जनाउनेलाई प्रितीको जवाफ छ, “समय अनुसार चल्नुपर्‍यो।” समयको माग अनुसार नै गीत तयार पारिएको उनको भनाइ छ। “गीत संगीत भनेको समयको माग अनुसार परिवर्तन हुनुपर्छ। मानिसहरू दिनप्रतिदिन परिवर्तन हुँदै जाने, उनीहरूको रूची चाहना परिवर्तन हुने। तर, गीत संगीत भने सधै परम्परागत नै हुनुपर्छ भन्ने छैन्,” प्रितीले आफ्नो शैलीको बचाउ गरिन्।
उक्त गीतका गीतकार एकनारायण भण्डारी पनि गीत संगीत समयको माग अनुसार अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। उक्त गीतमा प्रयोग गरिएका शब्दले कुनै समाजको यथार्त नै देखाउन खोजेको तर्क उनको छ। धेरैले भिडिओमा आपत्ति जनाउने गरेको अनुभव सुनाउँदै उनले त्यसलाई रमाइलोका लागि हेर्न आग्रह गरे। “हामीले महामारीका बेला घरमै बसिरहेका दर्शकहरूलाई विशुद्ध रमाइलोका लागि गीत तयार पारेका हौं,” भण्डारीले भने, “गीतले युवा पिढीको प्रतिनिधित्व गरेको छ।”
२ जुलाईमा गायक दुर्गेश थापाले तीज गीत सार्वजनिक गरे। गत वर्ष सार्वजनिक गरेको ‘बिच्च बिच्चमा’ को भाग दुई ल्याएका दुर्गेशले त्यसमा कोरोना महामारीलाई समेटेका छन्। समयको माग अनुसार नै आफूले गीत बनाएको दुर्गेशको भनाइ छ। “दुर्गेशले छाडा गीत बनायो, हाम्रो संस्कृतिमाथि प्रहार गर्‍यो भनिन्छ। तर, मैले त समाजमा हुने विकृति तथा विसंगीलाई उठान गर्दै आएको हुँ,” दुर्गेशको विश्वास छ।
वरिष्ठ गीतकार कृष्णहरि बराल पनि गीत संगीतलाई समय, दर्शकको माग अनुसार नै लैजानुपर्ने बताउँछन्। “गीत संगीत भनेका समाजकै प्रतिक हुन्। हामीले पनि समाजमै रहेर गीत संगीत निर्माण गर्ने हो। अनि समाजभन्दा बाहिर गएर कसरी काम गर्न सकिन्छ?” बरालले प्रश्न गरे।